Bit By Bit - Mustaqbalka - 7.2.1 Isku darka diyaaradaha iyo xannaaneynta
Ma ahan istiraatiijiyad is-diyaarin ah ama istiraatiijiyad sir ah ayaa si buuxda u isticmaala awoodda da'da digital. Mustaqbalka waxaan dooneynaa inaan abuurno Beelaha.
Hordhaca, waxaan ka soo horjeeda qaabka diyaarinta ee Marcel Duchamp oo leh qaabka xannaaneynta Michelangelo. Taasi waxay ka dhigan tahay farqiga u dhaxeeya saynisyahannada cilmiga, kuwaas oo u muuqda in ay la shaqeeyaan diyaaradaha, iyo cilmiga bulshada, kuwaas oo u muuqda in ay la shaqeeyaan xannaanooyinka. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, waxaan filayaa in aan arki doono Beelo badan sababtoo ah mid kasta oo ka mid ah hababkan saafiga ahi waa mid xadidan. Cilmi-baadhayaasha doonaya in ay isticmaalaan kaliya diyaaradaha waxay u socdaan inay la dagaalamaan sababtoo ah ma jiraan wax qurux badan oo qurux badan oo adduunka ah. Cilmi-baareyaasha doonaya in ay isticmaalaan macaamiisha kali ah, dhanka kale, waxay u socdaan in ay u huriyaan qiyaasta. Hase yeeshee, hababka khaliijka ah, waxay isku dari karaan cabirka la socda diyaar-garaadka si adag oo udhaxeeya su'aasha iyo xogta ka timaadda maamulayaasha.
Waxaan ku aragnaa tusaalayaal ka mid ah Beelahaas mid kasta oo ka mid ah cutubyada afar geesoodka ah. Cutubka 2aad, waxaanu aragnaa sida Google Flu Trends oo isku dhafan nidaamka xogta ee marwalba (raadinta raadinta) iyada oo la adeegsanayo nidaamka cabbirka dhaqanka ee habdhaqanka (nidaamka ilaalinta hargabka CDC) si loo soo saaro qiyaaso dhakhso ah (Ginsberg et al. 2009) . Cutubka 3aad, waxaanu aragnaa sida Stephen Ansolabehere iyo Eitan Hersh (2012) ay isku-dubaridaan xog-baadhitaan qaas ah oo ay sameeyeen xogta maamul-dowladeed oo diyaar ah si ay u bartaan wax badan oo ku saabsan sifooyinka dadka runtii u codeeya. Cutubka 4aad, waxaynu aragnay sida tijaabooyinka Opower ay isku dhafan tahay kaabayaasha cabbirka korontada ee diyaarinta korontada iyada oo loo marayo daweyn xannibaad ah si loo barto saameynta nidaamyada bulshada ee habdhaqanka malaayiin qof (Allcott 2015) . Ugu dambeyntii, cutubka 5, waxaan arkeynay sida Kenneth Benoit iyo asxaabtiisaba (2016) hirgeliyeen hannaanka xayiraadaha - nidaamka codaynta si ay u diyaariyaan jaangooyooyin muujinaya xisbiyada siyaasadda si loo abuuro xogta ay cilmi-baarayaashu u isticmaali karaan inay bartaan culeysyada doodaha siyaasadeed.
Afartan tusaalood oo dhan waxay muujinayaan in istaraatijiyad awood leh mustaqbalka ay noqon doonto in lagu kobciyo ilaha xogta, taas oo aan loo abuurin cilmi-baaris, macluumaad dheeraad ah oo ka dhigaya inay ku habboonaadaan cilmi-baaris (Groves 2011) . Haddii uu ka bilaabo xannaaneeyaha ama diyaar garowga, qaabkaan qaabdhismeedka wuxuu leeyahay ballan ballaadhan oo loogu talagalay dhibaatooyinka cilmi-baarista badan.